Maitiro Ekukurira Ekumusoro 5 Big Dhata Matambudziko? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Dhata Sayenzi, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Big data ndiyo hwaro hwekumukira kunotevera mumunda weRuzivo Technology. Makambani nhasi zvisinei nehukuru hwadzo ari kuita mari hombe mumunda we makuru data analytics. Iyi traction inouya nekuda kwezviri pachena makwikwi mabhenefiti ayo data rinopa mumisika yemazuva ano. Funga izvi, kune chaiyo kambani Fortune 1000 kambani, kuwedzera kwe10% mune iripo data kunogona kududzira kune anopfuura $ 65 mamirioni kuwedzera mumutengo wemari. Nehurombo, makambani anga achinyanya kunge asina kubudirira mukuita pfungwa kunze kwedata. Zvinoenderana ne NewVantage Partners ongororo, chete 37.1% yemakambani surveyed believe that they were successful in their big data endeavor. Hence, it is important to understand the prominent big data matambudziko and the steps you should take to overcome them.
Kufarira guru Data Analytics? Tarisa eBook yedu pane zvitsva zvazvino, shandisa makesi uye zviitiko:
Wepamusoro 5 Big Data Dambudziko uye avo Anogoneka Mhinduro:
1.Kubata Voluminous Dhata:
Iyo mwero panogadzirwa dhata hombe iri kuwanda kupfuura kuvandudzwa kwemacomputer uye masystem ekuchengetedza. Maererano ne IDC mushumo na2020, huwandu hwedata hunokwana kuzadza dutu remapiritsi akaenzana ne6.6 nguva chinhambwe pakati penyika nemwedzi. Pasina kushamisa kutarisira data risina kurongeka kuri kuramba kuchinetsa - 31% muna 2015 kusvika 45% muna 2016 - sezvakataurwa nevanoongorora.
Adding to this is the rise of complex data formats like audio, video, documents, evanhu vezvenhau, and the new smart devices. As per the IDC report, online business transactions will reach up to 450 bhiriyoni pazuva. Zvinoenderana neongororo yakaitwa neCisco, huwandu hwezvigadzirwa zvakabatana zvinosvika mabhiriyoni makumi mashanu mumakore mashanu chete, zvese izvi zvinounza huwandu hwakawanda hwe data.
Isu tave iko zvino tave kushandisa nzira yekuwedzera RDBMS (Relational dhatabhesi) iine simba rakawanda NoSQL Dhatabhesi se MongoDB uye DynamoDB. Zviripachena kuchengetedza dhata harisi iro rekupedzisira chinangwa. Isu tinodawo kuiongorora uye nekugadzira nzwisiso. Kubata kuverenga uye kuongorora akawanda akaparadzirwa komputa masystem senge Hadoop, Mukoko, Nguruve nezvimwe zviri kushandiswa nemasangano.
Read More: 3 Zvikonzero: Nei Akawanda Makuru Idhi Mapurojekiti Akatadza?
Kuperevedza kweData Masayendisiti:
Kufunga kwemasayendisiti e data uye vatungamiriri vebhizimusi hakuna kumbobvira kwave papeji rimwe chete. Vanopinda-chikamu chevanoongorora kazhinji vanotsauka kubva kune chairo bhizinesi kukosha kwedata uye vanoguma vaine njere dzisinganyatso kugadzirisa dambudziko riri mubvunzo. Pamusoro peiyo iyo yakaganhurirwa nhamba ye data sainzi inowanikwa mumusika ndiani anogona kununura kukosha.
2017 Robert Half Technology Mari Yemubhadharo yakaratidza kuti vese nyanzvi mumunda wedata hombe vakabhadharwa zvakasarudzika zvakanaka. Zvakadaro, masangano anotarisana nematambudziko mukuchengetedza tarenda repamusoro uye kudzidzisa ekupinda-chikamu chehunyanzvi kubva pakutanga kunodhura.
Masangano mazhinji, semhedzisiro, ari kuvandudza yekuzvishandira-yega ongororo mhinduro dzinoshandisa kushandisa michina, machine learning, uye chakagadzirwa njere kuti uwane njere kunze kwedata uine mashoma manyorerwo ekunyora macoding. Parizvino, tinogona kuona yakajairika kumusoro mukuhodha uye kudzidzisa bhajeti kudzamara dambudziko ragadziriswa.
Read More: Nei Uchisarudza Python yeBig Data Project?
3. Kuwana Real-time Insights:
Kuwanda kwekunetseka kunowedzerwa kana isu tasimuka kubva pakuongorora yakamira data kusvika pakubata chaiyo-nguva yekuisa. Izvi zvinoda mutsva mutsva we zvishandiso zvekuongorora data iyo inogona kubata data rechokwadi rechokwadi uye velocity. Zvishandiso izvi zvinosanganisira ETL injini, kuona, kuverenga, masisitimu, uye maraibhurari.
Bhizinesi rinowanzo kurasikirwa neruzivo rwakakosha nekuda kwekutadza kufambirana nedhata rinobva nekukurumidza. Izvi hazviuye sekushamisika kuti iyo PwC's Global Dhata uye Ongororo Ongororo 2016 kuwanikwa, "Munhu wese anoda kuti kuita sarudzo kurumidze." Izvi zvinonyanya kuitika kubhengi, inishuwarenzi, uye nezveutano.
Nguva pfupi yapfuura zvigadzirwa senge AWS Glue - Injini yakazara Inobvisa, Shanduko uye Mutoro (ETL) injini yakarerutsa basa remasayendisiti e data asi pachine nzira refu yekufamba. Iko zvakare kune zvimwe zvishandiso munzvimbo ino seXplenty, StarfishETL nezvimwe zvakadaro chimwe nechimwe chine zvipo zvakasiyana asi zvakazara chinangwa chekurerutsa ETL, kusanganisa uye manejimendi manejimendi. Mune ramangwana, tichaona maturusi akaomesesa ekuti zvinhu zvive nyore.
Read More: Iyo 7 Nhanho Big Dhata Strategic
4. Data Governance uye Chengetedzo:
Dhata hombe rinosanganisira kubata nedata kubva kune akawanda masosi uye mazhinji eaya masosi anoshandisa yakasarudzika fomati uye nzira yekuunganidza ye data ravo. Nekudaro zvakajairika kuwana kusawirirana mune dhata yeiyo kukosha kweiyo imwechete kusiana uye kugadzirisa kwavo kunonetsa zvikuru. Semuenzaniso, mune bhizimusi rekutengesa, kukosha kweyegore negore kutorwa kunogona kuve kwakasiyana zvichienderana neIPOC yemuno, online yekutengesa tracker, Enterprise resource planning (ERP) and company accounts. In such a scenario, the difference needs to be adjusted to find the appropriate answer. This process is called kutonga kwe data.
Rimwe dambudziko rakabatana nedata nderekuona kuchengetedzeka kwaro uye kuvimbika. Sezvo huwandu hwematanho uye yekubatanidza node iri yakakwira mikana yevanobiridzira vachishandisa kushushikana muhurongwa kunowedzera zvakawanda. Nekuda kwekukosha kwedata, tsaona diki inogona kukonzeresa kurasikirwa kukuru saka makambani anosungirwa kuunza akachengeteka maitiro muhurongwa hwavo.
Makambani ari kushingairira kushandisa yemhando mhinduro izvo regedzera muchina kudzidza kurwisa cybercrimes. Imwe yemuenzaniso wakakurumbira pano iyo Amazon Macie - gore-rakavakirwa sevhisi inonzwisisika inowana, inokamuranisa uye inochengetedza yakakosha data mune yeAWS yekuvakisa. Nekuwedzera kwekudiwa kwemhinduro dzakadai, tichaona mitsva yakawanda munzvimbo ino.
Read More: 6 Hacks Kuchengetedza Data Kuchengetedzwa
5. Kuramba kwesangano:
Kuvaka dhizaini yedhatabhesi mukambani haisi nyaya yekuhaya vamwe data masayendisiti. Muchokwadi, icho ndicho chikamu chiri nyore sezvo iwe uchigona kungoisa kunze kuongororwa. Chinetso chakakurumbira ndechekusimudzira kuvakwa kwekambani, chimiro uye tsika kuita dhizeti-based based decision
Pakati pepamusoro matambudziko faced by leaders today are insufficient organizational alignment, lack of adoption and understanding of the middle management and business resistance. Making these changes is very challenging for large enterprises who have built and scaled their operations on the traditional mechanisms.
Sekureva kwehunyanzvi hwePWC, makambani anofanirwa kutora vatungamiriri vane simba vasingangonzwisise dhata chete asi vanotora danho rekushora chinzvimbo chezviitiko zvazvino uye nekupa shanduko dzakakodzera. Zvinoenderana neongororo yakaitwa neNewVantage Partner, 55.9% emakambani eFortune 1000 akashaja maChief Data Mahofisi (maCDO) kuzadzisa ichi chinodiwa.
If you are looking for people who can leverage big data amidst all these matambudziko then you’re at the right place. With a skilled team of data scientists and passion for new age technologies, we are ready to handle any level of complex problems persistent in this field. Contact us today for a POC or consultation.